ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »4အမျိုးသမီးတစ်ဦးအားပြီးပြည့်စုံသောပထမဦးစွာအီးမေးလ်ပေးပို့ခြေလှမ်းများ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: စက်တင်ဘာ. 23 2020 |4မိဖတ်ပြီးသား
သင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အားဖြင့်သင်တို့၏အိပ်မက်သည်မိန်းမကိုရှာတွေ့ချင်တာလဲ? ကြီးမားသော, သင်ပြုစရာရှိသမျှသည်အများသောရေပန်းစားအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ sites များ၏တဦးတည်းအပေါ်တစ်ဦးရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဖွင့်ထားနှင့်မှတ်ပုံတင်အမျိုးသမီးများ profiles များအားလုံးမှတဆင့်ကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်.
့သူတို့ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေမှာကြည့်စရာမလိုပါ. ဒါဟာအဆင်းလှရုပ်ပုံလွှာကိုကြည့်ဖို့အမြဲကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်သင်တို့မူကားထွက်ရှာလိုလျှင်သင်အချင်းချင်းစေခြင်းငှါလျှင်, သင်သူမ၏ profile ဖတ်နှင့်သင်တူညီသောအကျိုးစီးပွားရှိပါကမြင်ရပါလိမ့်မယ်, ဝါသနာနှင့်ယုံကြည်ချက်.
သင် profiles များအားလုံး၏စုံတွဲတစ်တွဲကနေတဆင့်ကြည့်ပြီးသင်၌စိတ်ဝင်စားကြသူအနည်းဆုံးတစ်မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုတွေ့ကြပြီဆိုတာနဲ့, သူကသူမ၏သင့်ရဲ့ပထမဆုံးမက်ဆေ့ခ်ျကိုရေးဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်အများစုကိုအမျိုးသားတွေအနည်းဆုံးတစ်ဦးအမှားလုပ်သည့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်. သင်အွန်လိုင်းအော့ဖ်လိုင်းသို့မဟုတ်မိန်းကလေးတစ်ဦးထံချဉ်းကပ်ကြပါတယ်လျှင်နေပါစေ, နည်းမှန်လမ်းမှန်ထဲမှာစကားပြောခန်းစတင် လုံးဝအလွန်အရေးပါသည်.
ငါသည်သင်တို့ယခုသင်တို့ကိုကိုယ်တိုင်မေးမြန်းဖို့ငါသွားဘာကိုရှက်ကြောက်ခြင်းခံစားရစေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ချိန်းတွေ့ဘဝတိုးတက်လိုစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်, သင်ရိုးရိုးသားသားအောက်ပါမေးခွန်းကိုဖြေဆိုသင့်ပါသည်:
ငါသည်သင်တို့၏ profile ကိုကြည့်ခဲ့သင်တို့ကိုငါတကယ်လှပသောဖြစ်ကြသည်ထင်.
သင်သည်အများအားဖြင့်ဤကဲ့သို့သောမက်ဆေ့ခ်ျများရေးဖို့ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအထူးသဖြင့်အောင်မြင်သောမဟုတ်အဘယ်ကြောင့်စဉ်းစားနေစရာမလိုဘူး. သင်သည်မိန်းမကိုတဆယ်နှင့်အခြားယောက်ျားတွေမီသူမ၏စေလွှတ်တော်မူသောတူညီတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုရေးသားခြင်းအားဖြင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုအထင်ကြီးမည်မဟုတ်.
သင့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အောင်မြင်မှု skyrocket နိုင်ရန်အတွက်သင်အမြဲအတူတူလိုင်းများကိုအသုံးပြုကြသောပြည်သူများနှင့်အတူတူပင်စံချိန်စံညွှန်းမီမက်ဆေ့ခ်ျများ၏ဒြပ်ထုမှဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်မှတ်ထားဖို့ရှိသည်. သင်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်ထားပြီဆိုတာနဲ့, သင်တော့ဘူးမျှမယှဉ်ပြိုင်ရလိမ့်မည်.
1. သတင်း personalize
ယောက်ျားအများကြီးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့စပ်လျဉ်းအတွက်လုပ်ပထမဦးဆုံးအမှားသူတို့ပင်သူမ၏အမည်ရင်းကိုရှာဖွေရမည့်အချိန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမကြောင်း, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသူမ၏အမည်ပြောင်နှင့်အတူမက်ဆေ့ခ်ျကို personalize မှ. တချို့အမျိုးသမီးတွေ "sweet89" လို့ပဲခေါ်ကြတယ်လိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်သင်သူမ၏ချိန်းတွေ့ profile တွင်သူမ၏အမည်ရင်းကိုတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမဆိုလိုပေ.
ငါ profile တွင်တစ်နေရာရာ၎င်းတို့၏အမည်ရင်းဆင်းရေးသားခဲ့သည်သောမိန်းမတို့၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ပရိုဖိုင်းတွေအများကြီးမြင်ကြပြီ, ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အမည်ပြောင်တစ်ခုကဲ့သို့အတုနာမကိုအသုံးပြုလျှင်ပင်. သူမ၏အမည်ရင်းကိုရှာဖွေရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက်ချပြီး, သင်သူမ၏ profile ကိုဖတ်ရှုပြီးကြောင်းပြသ. အမျိုးသမီးတစ်ဦးကအများကြီးခွင့်ပြုဘို့ဤမယူကြဘူးနှင့်သင်အမှန်တကယ်သူမ၏ရုပ်ပုံထက်ပိုဂရုစိုက်သူကိုအနည်းငယ်ယောက်ျားတွေရဲ့တဦးတည်းဖြစ်၏လျှင်, သူတို့လုံးဝအထိအခိုက်ခံရသောများမှာ.
ထို့အပြင်အတွက်, ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကြှနျုပျတို့၏နာမညျကိုနားထောင်ခြင်းငှါကိုချစ်. ဒါကြောင့်ကိုယ့်ပထမဦးဆုံးမက်ဆေ့ခ်ျကိုသည်ပင်လျှင်, သင်သူမရဲ့နာမည်ကိုနှင့်အတူသူမ၏ဖြေရှင်းပေးရန်လျှင်သူမတစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုခံစားရပါလိမ့်မယ်. အမှု၌သင်တို့ကိုသူမ၏အမည်ရင်းကိုမတှေ့ဘူး, အနည်းဆုံးသူမ၏အမည်ပြောင်နှင့်အတူသင့်ရဲ့သတင်းစကား personalize သင့်ပါသည်, အစားအက "ယေဘုယျအသုံးပြုခြင်း၏"ဟေး.
သင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအားပေးရနိုင်ပါသည်အကောင်းဆုံးချီးမွမ်းဆိုတာဘာလဲ? ရိုးသားသည်နှင့်သူမရှေ့မှာမသန်းအဆမကြားတော်မူကြောင်းကိုတဦး. ၎င်းသည်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ site ပေါ်တွင်အဆင်းလှသောမိန်းမယောက်ျားတွေမှသတင်းစကားတွေအများကြီးရရှိသွားဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်နည်းပါးသည်.
အခွင့်အလမ်းတွေကိုထိုလူအပေါင်းတို့သည်သူမဘယ်လောက်လှပချစ်စရာသူမ၏ပြောပြသောမြင့်မား. သင်ကနောက်ဆုံးဆယ်ခုယောက်ျားတွေသူမ၏ရေးသားခဲ့သည်ကြောင်းအတိအကျတူညီလိုင်းကရေးသားခဲ့သည်ဘယ်သူ့အခြားကောင်လေးရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သူမဖြစ်ကောင်း reply မည်မဟုတ်. သင်သူမတင့်တယ်သည်ထင်သောမိန်းမပြောပြလိုလျှင်အဘယ်သို့, သူမ၏မျက်လုံးအစိမ်းရောင်ဖော်ရွေကြည့်နှင့်သူမ၏အပြုံးကသင်လည်းပြုံးစေသောကြောင့်,?
အဲဒီမတိုင်ခင်သူမ၏ရေးသားခဲ့သည်သောသူတကျိပ်ယောက်ျားတွေမပြောခဲ့ပါဘူးတစ်ခုခုင်. အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုတစ်ဦးတစ်ဦးချင်းစီအနေနဲ့ချီးမွမ်းပေးကမ်းခြင်းသည်အစဉ်အမြဲအခြားယောက်ျားတွေပြီးသားသူမ၏ပြောသည်သောတူညီသောအရာတွေဟု ဆို. ထက် သာ. ကောင်း၏. သင်ထိုမိန်းမအားမပေးလည်းတော်တော်လေးပုံများရှိသည်သောမိန်းမတို့၏အခြားရာပေါင်းများစွာသောဖို့ဆွဲဆောင်ကြတယ်ဆိုတာအတိအကျအဘယ်ကြောင့်သူမ၏ပြသ.
okay, သင်ထိုမိန်းမအားဆွဲဆောင်သောကြောင့်ငါသည်သင်တို့ကိုသူမ၏ရေးချင်တယ်သည်ကိုသိရ, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးရုပ်ပုံကိုမှသူမ၏ profile တွင်ပြသထားတယ်, သင်မူကား, သူမ၏သိကျွမ်းဖို့လိုတဲ့အဘယ်ကြောင့်အခြားအကြောင်းပြချက်ဘာတွေလုပ်နေလဲ? ဝမ်းနည်းပါတယ်ပေမယ့်ကောင်းတဲ့အပြုံးနှင့်ရှည်လျားသောဆံပင်ရွှေရောင်ဆံပင်သင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ site ပေါ်တွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သိကျွမ်းဖို့လိုတဲ့အဘယ်ကြောင့်သာအကြောင်းပြချက်မဖြစ်သင့်.
သင်သည်သင်၏ယေဘုယျအနေနဲ့ချီးမွမ်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးချီးမွမ်းသို့ပြောင်းသောအခါသူမသည်အထူးခံစားစေမည်, ဒါပေမယ့်သူမကပင်ပိုကောင်းသင်သူမ၏သူသည်သင့်ကိုဆွဲဆောင်ဘာကြောင့်အနည်းငယ်အကြောင်းပြချက်ရေးတဲ့အခါခံစားရပါလိမ့်မယ်, ကသူမ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်နဲ့ဘာမှရှိသည်.
သင်သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားကြအဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုအကြောင်းပြချက်ပေါင်းထည့်လိုလျှင်, ကိုတိုက်ရိုက်သူမကသူမ၏ profile တွင်စာရင်းသောစရိုက်များနှင့်ဝါသနာနဲ့ဆက်စပ်နေတာကြောင့်, အပြုသဘောဆောင်သည့်ပြန်ကြားချက်ဆိုတော့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအလွန်မြင့်မားဖြစ်လိမ့်မည်.
အမျိုးသမီးများဆွဲဆောင်မှုခံစားချင်တယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်ထက် ပို. စိတ်ဝင်စားနေသောအမျိုးသားများသည်ဆီးကြိုချင်တယ်. သင်သူမ၏ရူပအတွက်စိတ်ဝင်စားကြကြောင်းသင်ပထမဦးဆုံးသတင်းစကားနှင့်သူမ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတွက်သူမ၏ပြောပြခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်မိန်းမသည်အဘယ်သို့သာယာလှပသောသူမ၏ပြောပြသောသူအပေါင်းတို့ကိုယောက်ျားတွေမှဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်, ပင်သူမသည်အခြားလူမျိုး၏စောင့်ရှောက်မှုယူရတာကိုနှစ်သက်ပါတယ်ဘယ်လောက်သူမ၏ profile တွင်ရေးသားခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုတောင်သတိမပြုမိခြင်းမရှိဘဲ.
4. အဘယ်ကြောင့်အချင်းချင်းအဘို့အ Perfect Are?
အခုဆိုရင်သင်ပြီးပြည့်စုံသောပထမဦးဆုံးမက်ဆေ့ခ်ျကိုလိုအပ်နီးပါးအရာအားလုံးရှိသည်. ပျောက်ဆုံးနေဆဲသောတစ်ဦးတည်းသာပစ္စည်းရှိပါတယ်. သူသည်သင့်ကိုသူမ၏ရုပ်ရည်နှင့်သူမ၏စရိုက်ကိုမကြိုက်ကြောင်းသိတယ်, သင်သူမ၏စရိုက်ကိုကြိုက်တယ်ဘာကြောင့်ဒါပေမဲ့အမေလည်းသိပါဘူး?
သင်သူမ၏ရူပဖို့ဆွဲဆောင်ကြသည်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်လေးသိသာသည်သင်တို့မူကား, သူမ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတွက်စိတ်ဝင်စားကြအဘယ်ကြောင့်ထိုသို့မထင်ရှားဖြစ်. သင်သည်သင်တန်းကိုသင်တို့အားပေးသူမကောင်းစွာခရီးထွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုချစ်ကြောင်းရေးသားနိုင်, ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုသူမကသင်မယ့်ထောပတ်သူမ၏မျှော်ကျင့်သောနြို, ပင်ကအဓိပ္ပာယ်မပါဘဲ.
သင်တို့ကိုစုံလင်သည်ပထမဦးဆုံးမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖြည့်စွက်နိုင်ရန်အတွက်လုပ်ဖို့ရှိသည်နောက်ဆုံးသောအမှုသည်သင်တို့သူမ၏ဝါသနာနှင့်သူမ၏စရိုက်ကိုကြိုက်တယ်ဘာကြောင့်သူမ၏ပြောပြရန်ဖြစ်သည်. သင်ခရီးသွားခြင်းအတွက်သူမ၏စိတ်အားထက်သန်လေးမြတ်ကြောင်းသူမ၏ပြောနှင့်ပြီဆိုတာနဲ့, အကယ်လို့သင်ဟာအားလုံးအာရှကျော်ခရီးထွက်ခဲ့ပြီးလာမည့်နှစ်တွင်တောင်အမေရိကသွားချင်တယ်ကြပြီ, သင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအဘို့အပြည့်စုံပါတယ်အဘယ်ကြောင့်သူမနားလည်လိမ့်မည်.